Semalt: Ahoana ary ny fomba hanakanana ny Spam amin'ny fiteny amin'ny Google Analytics sy WordPress
Tena mampahatezitra ny mpampiasa WordPress sy Google ny mijery tranonkala momba ny spam ary ny fijery sandoka amin'ny pejy Internet. Ilana fotoana be ny famoronana sy fanentanana ny filtriera, ary ny ankamaroan'ny olona aza tsy mahalala akory ny fanakanana ny loharanom-baovao tsy fantatra amin'ny Internet. Maro amin'izy ireo no mahazatra amin'ny fifandraisana amin'ny spam, satria iray amin'ireo zavatra nanakorontana ny tranokalantsika nandritra ny volana maro.
Na izany aza, tao anatin'ny herinandro vitsy lasa izay, teknika vaovao sy paikady vaovao no nampidirina hanaisotra spam amin'ny aterineto. Ivan Konovalov, tompon'andraikitra ambony iray avy amin'ny Semalt , dia nandinika azy ireo tamin'ity lahatsoratra ity. Alohan'ny hanombohanay dia andao kely ny spam amin'ny fiteny.
Fampidirana amin'ny fiteny Spam
Ny "spam referral" dia midika hoe manimba ny lazanao sy ny toerana misy anao ao amin'ny valin'ny fikarohana . Fiteny amin'ny teny vahiny, etsy ankilany, dia teknika ampiasain'ireo spam mba hampiroboroboana ny tranonkalany manokana sy ny profil media sosialy. Ny sasany amin'ny ohatra amin'ny tranonkala dia Reddit, lifahack, motherboard, ary thenextweb. Ireo tranonkala dia mahazo ny tranokalany voasoratra ao amin'ireo sehatra ireo ary mandefa ny sandoka amin'ny tranokalanao amin'ny isa marobe. Ny tanjon'izy ireo dia ny hamotika ny toerana misy ny tranonkalanao ary hahatonga azy ireo ho tsara toerana amin'ny aterineto.
Ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra hanakanana ny tranonkala miteny dia mety hamotika ny toerana misy anao amin'ny valin'ny fikarohana..Na dia nanao SEO fotsy hoditra aza ianao ary mandany fotoana betsaka amin'ny fanoratana lahatsoratra dia afaka mamitaka anao ny fiteny spam ary handrava ny zava-drehetra amin'ny fotoana tsy voafetra. Mety tsy ho vitan'ny olona ny hanasivana azy ireo ao amin'ny Google Analytics, ary izany no tokony hanaisotra azy ireo na hanakanana azy ireo amin'ny fomba maro.
Spam amin'ny fiteny Blocked amin'ny Google Analytics
Misy safidy vitsivitsy hahatsiarovana raha te hanakana ny spam amin'ny Google Analytics sy WordPress ianao. Ny fomba tsotra sy tsara indrindra dia ny mametraka Plugins WordPress. Azonao atao ny manandrana ireto manaraka ireto:
# 1. Manamboara filtre hanakana ny tranonkala miteny
Ny safidy voalohany dia ny hananganana filtre mba hanakanana ny tranonkala amin'ny Google Analytics. Azonao atao ny mamorona filiro marobe izay mifototra amin'ny fepetra takinao ary afaka manafoana sy manova ny angona. Azonao atao ny manakana ny adiresy IP tsy mampiahiahy mba hiantohana ny fiarovana ny tranokalanao amin'ny aterineto. Fomba iray hafa koa ny mamorona loharanon-tsoriaka, sora-baventy, ary loharanom-pamokarana whitelist, ary manakana ireo loharano tsy fantatra.
# 2. Ampiasao fizarana haingana
Azonao atao ny manakana ny spam amin'ny fiteny mora kokoa amin'ny fanampiana ireo sehatra avo. Fomba iray hafa mahavariana ny fanesorana spam ao amin'ny Google Analytics, saingy ity safidy ity dia tsy miasa afa-tsy rehefa manana antontan-kevitra ara-tantara ianao mba hikarakarana. Safidy azo antoka kokoa noho ny famoronana sivana ary manampy amin'ny fanovana ny angona ao amin'ny Google Analytics. Tsy maintsy manaisotra fotsiny ny zava-drehetra sy ny loharanom-baovao rehetra tsy atokisanao ianao. Na izany aza, raha nampiasa filokana maromaro ho an'ny adiresy IP samy hafa ianao, dia tokony hanangana sehatra ho azy rehetra ao amin'ny fizarana Admin amin'ny Google Analytics.
# 3. Ampiasao lisitra fahatelo
Azo atao ny manakana ny spam amin'ny lisitry ny lisitry ny olon-kafa. Mety handany fotoana be izany, saingy ny vokatra dia lehibe foana. Ilaina ny fanavaozana ny sivana sy ny ampahany tsy tapaka mba hahazoana antoka fa mahazo ny angona marina indrindra amin'ny Internet ianao Source .